China 50MM / 55MM / 63MM Herb Grinder 4 chidimbu Zinc Alloy Spice Crusher Kugadzira uye Fekitori | Nyundo
50MM / 55MM / 63MM Herb Grinder 4 Peece Zinc Alloy Spice Crusher
EXCELLENT DRY HERB GRINDER, ANOGONESA ZVINOGONESA - Yakakwana mapuraneti mapurasitiki anogaya zvekugaya ako ese mashizha akaomeswa eshizha / anonhuwirira. Kuremerwa nebasa uye kukwidziridzwa kumusoro kunoita kuti kukura kuve nemhepo! Iyo yemagineti 4 chidimbu grinders uye simbi 3 makamuri grress inova nechokwadi kuti haurasikirwe nekusaswa kwemakwenzi ako.
Ruvara: Grey / Dema / Green / Bhuruu / Tsvuku / sirivheri
Saizi (Dhigiri x Height): 2 x 1.57 inch (50 x 40mm)
•EXCELLENT DRY HERB GRINDER, ANOGONESA ZVINOGONESA - Yakakwana mapuranga emapurasitiki anogaya zvekuumbiridza zvese zvemashanga ako akaomeswa mashizha / anonhuwirira. Kuremerwa nebasa uye kukwidziridzwa kumusoro kunoita kuti kukura kuve nemhepo! Iyo yemagineti 4 chidimbu grinders uye simbi 3 makamuri grress inova nechokwadi kuti haurasikirwe nekusaswa kwemakwenzi ako.
• RAZOR-SHARP METAL TEETH, GADZIRA PASI - Iyi iplatin grinder yakavakirwa kubva kune yakasimba uye inogara yakasimba zinc alloy simbi. Iyo shizha girazi Sharp Meno inova nechokwadi iwe rakapetwa twist & inoshanda Kukusha. Grinder yakaoma mbesa.
• KUKOSHA-KUKOSHESA MESH SCREEN FILTERS, KUNYANYA KUPEDZESA SIMBA - Iyi planium grinders yakaoma yemakwenzi grinder nePollen Scraper yakagadzirwa yakasimba uye yakakwira mhando midziyo inovimbisa kushanda kwakanyanya uye kusimba.
• ULTRA STRONG LID MAGNET, LESS WASTE - Iyo magineti ari pamusoro peiyi grress inobata yakasimba, Iyo yakagadziriswa yevhara inobatsira zvakanyanya kuderedza kupera. Kusiyana nemamwe mashizha grinder chivharo chinowira pasi nyore kana uchishanda. Iyi yakaoma herb grinder ine magnets akasimba inobata chivharo chakasimba munzvimbo. Iyi grress crusher iri nyore kupindika uye haigadzi kuita inosiririsa simbi inonzwika.
• PERFECT SIZE, VERY PORTABLE CUTE TRAVEL GRINDER - Iyo simbi platinamu inokodzera muhomwe yako, Inouya nePollen scraper, yakanyanya nyore, Great crusher grinders yevasikana. Kana iwe uchifunga kuti iwe uchave unodemba mushure mekutenga ichi chigadzirwa, usatya nekuti ichi ndicho chakanyatso grinder chaunogona kutenga.
• ZVINOGONESESA KUSHANDISA & CLEAN - Iyi yakakora mashizha grinder inobatsira kuchengetedza nguva yako sezvo iri nyore kwazvo kushandisa. Ingotenderedza kumusoro nekudzoka kwenguva diki. Uyezve, zvikukutu zviri nyore kwazvo kuti zvirambe zvakachena, ingoshandisa sipo uye mvura uye iyo inosvina inogona kubatsira kubvisa chero zvimedu zvehupfu kubva kumubatisi wemuti.